PLANTRONICS BackBeat प्रो2- समिक्षा - समाचार नियम
PLANTRONICS BackBeat प्रो2– समिक्षा
यो PLANTRONICS BackBeat प्रो2वायरलेस हल्ला-रद्द हेडफोन हेडफोन को एक धेरै राम्रो जोडी हो, कि चार्ज उमेर रहन्न, राम्रो नियन्त्रण छ, ठोस सक्रिय हल्ला रद्द र एक ध्वनि प्रोफाइल धेरै खुसी हुनेछ.
24 ब्याट्री जीवन घन्टा, राम्रो नियन्त्रण र बास को धेरै धेरै ठूलो आवाज हुनेछ, तर तपाईं शास्त्रीय संगीत को एक प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, अन्यत्र हेर्न
शीर्षक यो लेख “PLANTRONICS BackBeat प्रो 2: बोस-स्तर वायरलेस हल्ला बजेट मा रद्द” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, बुधवार 1st फरवरी मा theguardian.com लागि 2017 08.30 UTC
PLANTRONICS तेस्रो-कम भन्दा बजार नेताहरूले लागि वायरलेस हेडफोन रद्द शीर्ष अन्तमा हल्ला प्रतिज्ञा, तर नयाँ BackBeat प्रो 2s साँच्चै छुटकारा गर्छन्?
नयाँ BackBeat प्रो 2s मात्र आफ्नो forbears एक पारित समानता छ. एक थप Ergonomic गोलो पक्षमा राउन्ड आकार बरु केही भागमा तिनीहरूलाई छोएर भन्दा कान वरिपरि मिलेको गएको छ.
तिनीहरू पनि हल्का र अधिक आरामदायक हुनुहुन्छ, को earcup मा राम्रो समायोजन संग टाउको विभिन्न आकारहरू समायोजित गर्न. तिनीहरूले के छैन यो एउटा कुरा गुना माथि छ, को earcups तालिका मा फ्लैट झूठ सक्छन् मात्र swiveling, तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा तिनीहरूले एक झोला मा वरिपरि पूरा गर्न एकदम भारी हुनुहुन्छ अर्थ.
बायाँ earcup एक केन्द्रीय पज-प्ले बटन छ, मात्रा मिलाएर लागि flanking ट्रयाक-छड्नुहोस् बटन र एक jog पाङ्ग्रा. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
बायाँ earcup एक केन्द्रीय पज-प्ले बटन छ, मात्रा मिलाएर लागि flanking ट्रयाक-छड्नुहोस् बटन र एक jog पाङ्ग्रा. रद्द वा सक्रिय हल्ला बन्द गर्ने पक्षमा एक स्विच पनि त्यहाँ, एक रेल मा घोषणाहरू सुनेर लागि उपयोगी - वा माइक्रोफोन प्रयोग हेडफोन मा बाहिर संसारको शोर फीड.
सही earcup को microUSB चार्ज पोर्ट छ, तार सुन्दै लागि हेडफोन केबल सकेट, एक शक्ति स्विच पनि ब्लुटुथ एक कल मा जब लागि Google सहायक वा सिरी र रातो माइक्रोफोन म्युट बटन ट्रिगरिङ लागि एक बहु-समारोह बटन जोडी शुरू.
सबै बटन र स्विच ठोस महसुस, जबकि मात्रा jog डायल राम्रो काम गर्दछ. तपाईं तिनीहरूलाई हटाउन र जब तपाईं आफ्नो कान भन्दा फिर्ता तिनीहरूलाई राख्नु प्लेब्याक फेरि सुरु गर्दा हेडफोन पनि संगीत रोक्न सक्नुहुन्छ.
PLANTRONICS BackBeat प्रो2समीक्षा – लोगो तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
पुरानो BackBeat प्रो हेडफोन बास को धेरै थियो, तर यो noticeably हल्ला रद्द खुला भएको थियो जब कम थियो. नयाँ प्रो2हेडफोन सक्रिय हल्ला रद्द कारण नै मौन गरिँदै समस्या ग्रस्त छैन. वास्तबमा, भन्न भन्दा बोस QC35 धेरै - - तिनीहरूले राम्रो पूर्ण र गोलो बास छ तर तिनीहरूले ध्वनि अचाक्ली यसलाई द्वारा संचालित गर्छन्. यो ट्रेबल र Highs बाहिर डुबेर मर्छन् छैन र बास मड्डी भन्दा तेज र punchy छ.
एक थप सन्तुलित वा तटस्थ ध्वनि लागि देख ती अन्यत्र हेर्न आवश्यक हुनेछ, तर तिनीहरूले एक ठोस बास ट्रयाक संग इलेक्ट्रनिका र केहि खुवाउनु गर्दा पनि कम मात्रा मा ठूलो सुनिन्थ्यो. यस्तो एरिक क्लैप्टन गरेको Layla रूपमा रक ट्रयाक ठूलो सुनिन्थ्यो, तर Holst गरेको वृहस्पति जस्तै केहि सुनिन्थ्यो अलि सन्तुलित हेडफोन सम्बन्धित चमक बिना कठोर र खोक्रो.
अवरुद्ध पृष्ठभूमि हल्ला मा राम्रो, तर ठूलो छैन भने वरिपरि घण्टीको फोनको. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सक्रिय हल्ला रद्द इन्जिन हल्ला को ड्रोन हटाउने मा धेरै प्रभावकारी हुन्छ, तर एक यात्रुवाहक रेल मा फोन को अचानक हल्ला बन्द जाँदै विरुद्ध यति कम वा यस्तै छ. बीच प्रो 2s र बजार-नेता बोस QC35 सबैभन्दा ठूलो भिन्नता आफ्नो निष्क्रिय हल्ला अवरुद्ध मा साँच्चै छ - तपाईं प्रो तपाईंलाई वरिपरि कुराकानी बढी सुन्न सक्नुहुन्छ2आफ्नो टाउको मा.
प्रो 2s अझै पनि धेरै अन्य प्रतिद्वन्द्वी भन्दा बढी प्रभावकारी छन्, केवल एकदम सुन मानक अधिक महंगा QC35 बसालेको.
तपाईंको यात्रा मार्फत हेर्न पर्याप्त ब्याट्री भन्दा बढी. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
PLANTRONICS दर भएको रूपमा BackBeat प्रो 2s 24 ब्याट्री जीवन घन्टा, जो म मेरो सुन्न साथ पायो के छ. तिनीहरूले नियमित यात्रा को सप्ताह लामो र लेखन ध्यान गर्दा सक्रिय हल्ला-रद्द संग कार्यालयमा सुनेर. म तिनीहरू हल्ला बन्द वा केबल मार्फत रद्द संग पनि अब पछिल्लो छौँ संदिग्ध.
एक microUSB केबल मार्फत चार्ज एक अपेक्षाकृत लामो समय लिए, पूर्ण समतल देखि तीन घण्टा क्षेत्रमा कहीं, तर दिइएको 24 ब्याट्री जीवन घन्टा, म एक ठोस व्यापार बन्द छ लाग्छ. एक साथ Topping 30 मिनेट शुल्क एक दिनको यात्रा मार्फत हेर्न पक्कै पर्याप्त भन्दा बढी थियो.
ठोस बरु भारी कठिन मामला. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
अधिक महंगा "एसई" संस्करण संग आपूर्ति कठिन मामला ठोस तर यात्रा को लागि बरु भारी छ
आपूर्ति एनालग केबल यो एउटा माइक्रोफोन वा संगीत नियन्त्रण छैन
ब्लुटुथ जडान भर उत्कृष्ट थियो
यो PLANTRONICS BackBeat प्रो2दुई संस्करण उपलब्ध छन्, प्रो2£ 220 लागत खैरो र £ 250 को लागि एक कठिन लैजाने मामला संग एक खरानी.
तिनीहरूले लामो समयसम्म सुन्ने लागि लगाउन सहज हुनुहुन्छ र यस्तो स्वतः पज-प्ले तपाईं आफ्नो टाउको हटाउन हुँदा केही राम्रो टचहरू छ. तर र सन्तुलित ध्वनि लागि देख ती धेरै हल्ला सर्वश्रेष्ठ अवरुद्ध अरू हेर्नुपर्छ जहाँ.
तपाईं एक राम्रो मूल्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने, वायरलेस हल्ला-रद्द हेडफोन को राम्रो-लग र प्रभावकारी जोडी, तपाईं टाढा संग BackBeat प्रो 2s गलत छैन जानेछ.
पेशेवरों: धेरै लामो ब्याट्री जीवन, आरामदायक, राम्रो हल्ला रद्द, राम्रो बास, राम्रो नियन्त्रण, राम्रो मूल्य
नकारात्मक: ध्वनि प्रोफाइल सबैलाई अनुरूप छैन, यात्रा को लागि विशेष रूप अप गुना छैन, निष्क्रिय हल्ला अलग राम्रो हुन सक्छ
फिलिप्स SHB9850NC हेडफोन समीक्षा: हल्ला बैंक भंग बिना रद्द
लेख, डिजिटल संगीत र अडियो, ग्याजेटहरू, हेडफोन, समीक्षा, शमूएल गिब्स, प्रविधि
← nintendo स्विच: हामी नयाँ कन्सोल के अपेक्षा गरिएको छ हुनुहुन्छ सैमसंग ग्यालेक्सी S8 र S8 + 'अनन्त प्रदर्शन संग अनावरण’ →